ဘာ့ကြောင့် ဆံပင် ဆေး မဆိုးခဲ့ရ သလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးဖွယ် နေ့ရက် တစ်ခုကို ဖန်တီး သွားခဲ့တဲ့ #ပေါ့ဂ်ဘာ - SPORTS MYANMAR
ဘာ့ကြောင့် ဆံပင် ဆေး မဆိုးခဲ့ရ သလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးဖွယ် နေ့ရက် တစ်ခုကို ဖန်တီး သွားခဲ့တဲ့ #ပေါ့ဂ်ဘာ
လူတွေကို သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်း အပေါ်မှာသာ ဝေဖန်မှု ပြုလုပ် စေလိုခဲ့တာကြောင့် ယူနိုက်တက်နဲ့ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်းတို့ ရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ပေါ့လ် ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ အတွင်း သူအနှစ်သက်ဆုံး အရာ ဖြစ်တဲ့ ဆံပင် ဆေးဆိုးခြင်း ကိစ္စကို မပြုလုပ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားလိုက် ပါတယ် ။
ပေါ့ဂ်ဘာဟာ တနင်္လာနေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လူမှုကွန်ယက် အင်စတာဂရမ် ပေါ်က ပရိသတ်တွေ နဲ့ အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ တစ်ခုမှာ အခုလို ထုတ် ဖော် ဖြေကြား သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဆိုပါ မေးခွန်းတွေ ထဲက တစ်ခု ကတော့ …
” မင်း ကမ္ဘာ့ ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကာလ အတွင်းမှာ ဘာ့ကြောင့် ဆံပင်ကို ဆေး မဆိုး ခဲ့တာလဲ ? ” ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဆိုပါ မေးခွန်းကို ပေါ့ဂ်ဘာက …
” ကျွန်တော် ငြိမ်းချမ်းမှုကို အလိုရှိခဲ့တဲ့ ၊ လူတွေ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်း ကိုသာ အာရုံစိုက် စောင့်ကြည့် ကြပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ အသွင်အပြင် နဲ့ ပတ်သက်လို့ စောဒက တက်စရာ မလိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု မျိုးပေါ့ ။ သူတို့တွေကို ကျွန်တော်ရဲ့ ဘောလုံးပိုင်း ၊ ခြေစွမ်းပိုင်း ဆိုင်ရာပဲ ဝေဖန် စေချင်ခဲ့ ပါတယ် ” လို့ တန့်ပြန် ဖြေကြား သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မကြာသေးခင် ကပဲ ယူနိုက်တက် နည်းပြကြီး ဟိုဆေး မော်ရင်ဟိုက ပေါ့ဂ်ဘာကို သူ့ဖက်က အသင်းအတွက် ဘာတွေ ပေးနိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်သာ အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင် သွားဖို့ ပြောကြား သွားခဲ့ ပါသေးတယ် ။
ယူနိုက်တက် နည်းပြကြီး ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ကတော့ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ ဖလား ကို ပူပူနွေးနွေး ရယူ ဆွတ်ခူး ပေါ့ဂ်ဘာ အနေနဲ့ သူ အသင်း အတွက် ဘာတွေ လုပ်ပေး နိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်ကိုသာ အသေအချာ အာရုံစိုက် သင့်ကြောင်း ၊ ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ဘောလုံး အပေါ် အသေအချာ အာရုံစိုက်တဲ့ အတွက် ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေက အကောင်းဆုံး သက်သေတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြား ထားခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် မကြာခန ဆိုသလို ဝေဖန် ခံရတဲ့ အကြောင်း ကိစ္စတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး …
” ကျွန်တော် ကတော့ ကွင်းထဲမှာ ဘာလုပ် ရမလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ် ကိုသာ အပြည့် အဝ အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင် နေဆဲ ပါပဲ ။ ကျွန်တော့် အရည်အချင်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ဘယ်တုန်းကမှ သံသယ မဖြစ်ခဲ့ ဖူးပါဘူး ” လို့ ပေါ့ဂ်ဘာက ဖြေကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် စပ်စုတဲ့ ပရိသတ် အချို့က သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလား ဆုတံဆိပ် အကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ ကြရာမှာ ပေါ့ဂ်ဘာက ” ကျွန်တော့် ဆုတံဆိပ်ကို အမေ့ဆီ ပေးထား ခဲ့ပါတယ် ။ အင်း … ကျွန်တော့်ရဲ့ အားလပ်ရက်တွေ ကုန်ဆုံးရင်တော့ သူ ပြန်ပေး လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ် ” လို့ ပြန်လည် ဟာသလုပ် ဖြေကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပရိသတ် တစ်ဦးကတော့ ” စနေနေ့ တုန်းက ငါ့ရဲ့ မွေးနေ့ ပြီးဆုံးခဲ့ ပါပြီ ။ မင်းဆီက ဂျာစီ လက်ဆောင် ရရင်တော့ ငါ့ရဲ့ အိပ်မက်တွေဟာ အမှတ်တကယ် ဖြစ်လာ ပါလိမ့်မယ် ” လို့ ရေးသား သွားခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ရေးသားချက်ကို ပေါ့ဂ်ဘာက ” ဟေး ၊ မင်း အဲ့တာ ရသွားပြီ ၊ အိပ်မက်ထဲကို ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်လေ ၊ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ လေးပါ ” လို့ ပြန်လည် စ,နောက် ဖြေကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အခြား ပရိသတ် တစ်ဦးကတော့ … ” မင်း ယူကျု့ ချန်နယ် တစ်ခု ထောင်ပြီး မင်းရဲ့ နေစဉ် ဘဝကို ဖော်ပြ ပေးပါလား ? ပေါ့ဂ်ဘာ ဒိုင်ဟာရီ ဆိုတဲ့ ပုံစံ လိုမျိုးလေ ” လို့ မေးမြန်း သွားခဲ့ရာမှာ ပေါ့ဂ်ဘာက ” အေးဟ ၊ Pogvlog ဆိုတာမျိုး ငါလုပ်ကောင်း လုပ်ဖြစ် လိမ့်မယ် ” လို့ ဖြေကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
တနင်္လာနေ့ ကတော့ ပေါ့ဂ်ဘာနဲ့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကြား ရယ်မော ပျော်ရွှင်စရာ နေ့ရက်လေး တစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့ ပါတယ် ။
Ref : Mail Online Sport
ကမ္ဘာ့ဖလား ပွိုငျပှဲမှာ ဘာ့ကွောငျ့ ဆံပငျ ဆေး မဆိုးခဲ့ရ သလဲ ဆိုတာ ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ပွီး ပရိသတျတှနေဲ့ ပြျောရှငျ ကွညျနူးဖှယျ နရေ့ကျ တဈခုကို ဖနျတီး သှားခဲ့တဲ့ #ပေါ့ဂျဘာ
လူတှကေို သူ့ရဲ့ ခွစှေမျး အပျေါမှာသာ ဝဖေနျမှု ပွုလုပျ စလေိုခဲ့တာကွောငျ့ ယူနိုကျတကျနဲ့ ပွငျသဈ လကျရှေးစငျ အသငျးတို့ ရဲ့ ကှငျးလယျလူ ပေါ့လျ ပေါ့ဂျဘာဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပွိုငျပှဲ အတှငျး သူအနှဈသကျဆုံး အရာ ဖွဈတဲ့ ဆံပငျ ဆေးဆိုးခွငျး ကိစ်စကို မပွုလုပျ ဖွဈခဲ့ကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားလိုကျ ပါတယျ ။
ပေါ့ဂျဘာဟာ တနင်ျလာနမှေ့ာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ လူမှုကှနျယကျ အငျစတာဂရမျ ပျေါက ပရိသတျတှေ နဲ့ အမေးအဖွေ ကဏ်ဍ တဈခုမှာ အခုလို ထုတျ ဖျော ဖွကွေား သှားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ အဆိုပါ မေးခှနျးတှေ ထဲက တဈခု ကတော့ …
” မငျး ကမ္ဘာ့ ဖလား ပွိုငျပှဲ ကာလ အတှငျးမှာ ဘာ့ကွောငျ့ ဆံပငျကို ဆေး မဆိုး ခဲ့တာလဲ ? ” ဆိုတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ အဆိုပါ မေးခှနျးကို ပေါ့ဂျဘာက …
” ကြှနျတျော ငွိမျးခမျြးမှုကို အလိုရှိခဲ့တဲ့ ၊ လူတှေ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ခွစှေမျးပိုငျး ကိုသာ အာရုံစိုကျ စောငျ့ကွညျ့ ကွပွီး ကြှနျတော့ရဲ့ အသှငျအပွငျ နဲ့ ပတျသကျလို့ စောဒက တကျစရာ မလိုတဲ့ ငွိမျးခမျြးမှု မြိုးပေါ့ ။ သူတို့တှကေို ကြှနျတျောရဲ့ ဘောလုံးပိုငျး ၊ ခွစှေမျးပိုငျး ဆိုငျရာပဲ ဝဖေနျ စခေငျြခဲ့ ပါတယျ ” လို့ တနျ့ပွနျ ဖွကွေား သှားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
မကွာသေးခငျ ကပဲ ယူနိုကျတကျ နညျးပွကွီး ဟိုဆေး မျောရငျဟိုက ပေါ့ဂျဘာကို သူ့ဖကျက အသငျးအတှကျ ဘာတှေ ပေးနိုငျသလဲ ဆိုတဲ့ အပျေါသာ အာရုံစိုကျ လုပျဆောငျ သှားဖို့ ပွောကွား သှားခဲ့ ပါသေးတယျ ။
ယူနိုကျတကျ နညျးပွကွီး ဟိုဆေး မျောရငျဟို ကတော့ လကျရှိ ကမ္ဘာ့ ဖလား ကို ပူပူနှေးနှေး ရယူ ဆှတျခူး ပေါ့ဂျဘာ အနနေဲ့ သူ အသငျး အတှကျ ဘာတှေ လုပျပေး နိုငျသလဲ ဆိုတဲ့ အပျေါကိုသာ အသအေခြာ အာရုံစိုကျ သငျ့ကွောငျး ၊ ပေါ့ဂျဘာဟာ ဘောလုံး အပျေါ အသအေခြာ အာရုံစိုကျတဲ့ အတှကျ ရရှိခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေ အကောငျးဆုံး သကျသတှေေ ဖွဈတယျလို့ ယုံကွညျကွောငျး ပွောကွား ထားခဲ့ တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
အဲ့ဒီနောကျ မကွာခန ဆိုသလို ဝဖေနျ ခံရတဲ့ အကွောငျး ကိစ်စတှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး …
” ကြှနျတျော ကတော့ ကှငျးထဲမှာ ဘာလုပျ ရမလဲ ဆိုတဲ့ အပျေါ ကိုသာ အပွညျ့ အဝ အာရုံစိုကျ လုပျဆောငျ နဆေဲ ပါပဲ ။ ကြှနျတေျာ့ အရညျအခငျြး နဲ့ ပတျသကျလို့ မိမိကိုယျကိုယျ ဘယျတုနျးကမှ သံသယ မဖွဈခဲ့ ဖူးပါဘူး ” လို့ ပေါ့ဂျဘာက ဖွကွေား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ စပျစုတဲ့ ပရိသတျ အခြို့က သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလား ဆုတံဆိပျ အကွောငျး မေးမွနျးခဲ့ ကွရာမှာ ပေါ့ဂျဘာက ” ကြှနျတေျာ့ ဆုတံဆိပျကို အမဆေီ့ ပေးထား ခဲ့ပါတယျ ။ အငျး … ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အားလပျရကျတှေ ကုနျဆုံးရငျတော့ သူ ပွနျပေး လိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ ပါတယျ ” လို့ ပွနျလညျ ဟာသလုပျ ဖွကွေား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ပရိသတျ တဈဦးကတော့ ” စနနေေ့ တုနျးက ငါ့ရဲ့ မှေးနေ့ ပွီးဆုံးခဲ့ ပါပွီ ။ မငျးဆီက ဂြာစီ လကျဆောငျ ရရငျတော့ ငါ့ရဲ့ အိပျမကျတှဟော အမှတျတကယျ ဖွဈလာ ပါလိမျ့မယျ ” လို့ ရေးသား သှားခဲ့ ပါတယျ ။ အဆိုပါ ရေးသားခကျြကို ပေါ့ဂျဘာက ” ဟေး ၊ မငျး အဲ့တာ ရသှားပွီ ၊ အိပျမကျထဲကို ပွနျဝငျကွညျ့လိုကျလေ ၊ ပြျောရှငျစရာ မှေးနေ့ လေးပါ ” လို့ ပွနျလညျ စ,နောကျ ဖွကွေား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
အခွား ပရိသတျ တဈဦးကတော့ … ” မငျး ယူကြု့ ခနျြနယျ တဈခု ထောငျပွီး မငျးရဲ့ နစေဉျ ဘဝကို ဖျောပွ ပေးပါလား ? ပေါ့ဂျဘာ ဒိုငျဟာရီ ဆိုတဲ့ ပုံစံ လိုမြိုးလေ ” လို့ မေးမွနျး သှားခဲ့ရာမှာ ပေါ့ဂျဘာက ” အေးဟ ၊ Pogvlog ဆိုတာမြိုး ငါလုပျကောငျး လုပျဖွဈ လိမျ့မယျ ” လို့ ဖွကွေား သှားခဲ့ပါတယျ ။
တနင်ျလာနေ့ ကတော့ ပေါ့ဂျဘာနဲ့ သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှကွေား ရယျမော ပြျောရှငျစရာ နရေ့ကျလေး တဈခု ဖွဈသှားခဲ့ ပါတယျ ။